नमोबुद्ध नगरपालिकाद्धारा इँटाभट्टा सञ्चालनमा रोक – Radio Roshi
नमोबुद्ध नगरपालिका वडा नं ५ बाट नमुना प्रवलिकरण कार्यक्रम सुरु
संस्कृती जोगाउने प्रणसहीत सकीयो तेस्रो तामाङ चलचीत्र महोत्सव
रेडियो रोशीको सफल प्रशारण अवधीको एक बर्ष पुरा
२४ हजार प्रभ्रावितले अझै घर बनाउन सुरु गरेनन, ग्रामीणमा दोस्रो, शहरमा तेस्रो किस्ता लिनेको संख्या बढी
तेमालको राधाकृष्ण माविको भवन उद्घाटन
समृद्धिको निम्ती सञ्चार
नमोबुद्ध नगरपालिकाद्धारा इँटाभट्टा सञ्चालनमा रोक
November 18, 2018 November 18, 2018 RoshiKhabar	0 Comments
मंसिर १, काभ्रेपलाञ्चोक
नमोबुद्ध नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा इँटा उद्योग सञ्चालनमा रोक लगाएको छ । यसअघि चालु आर्थिक वर्षका लागि कार्यालयले नगरपालिका क्षेत्रभित्र अव्यवस्थित इँटा उद्योगको नवीकरणमा समेत रोक लगाएको थियो । कार्यालयले आज सूचना जारी गर्दै सर्वसाधारणलाई इँटा उद्योगलाई आफ्नो जमीन उपलब्ध नगराउन अनुरोध गरेको छ ।
स्थानीयवासीले केही वर्षदेखि इँटा उद्योगका लागि आफ्नो जमीन भाडामा दिँदै आएका थिए । नगरप्रमुख टङ्कप्रसाद शर्माले इँटा उद्योगको गत आर्थिक वर्षको कर मात्र लिएको र चालु आर्थिक वर्षको दर्ता÷नवीकरण रोकिएको बताउनुभयो । नमोबुद्ध नगरपालिकाका ३१ सङ्घसंस्थाले भकुण्डेमा रहेका इँटा उद्योग सञ्चालनमा रोक लगाउन कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए ।
जिल्लामा सञ्चालित २० इँटा उद्योगमध्ये नमोबुद्धको भकुण्डेमा आठ इँटा उद्योग छन् । गत वैशाखमा वातावरण विभाग र नमोबुद्ध नगरपालिकाको संयुक्त अध्ययन, अनुगमन टोलीले भकुण्डेमा सञ्चालित इँटा उद्योग मापदण्ड विपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । टोलीले इँटा उद्योगबाट निस्कने धुँवा–धुलोका कारण मानव, घरपालुवा जनावर, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा असर परेको जनाएको थियो ।
यस्तै पाँचखाल नगरपालिकाले समेत इँटा व्यवसायीलाई मापदण्डअनुरुप सञ्चालन गरिएको वातावरणमैत्री प्रमाण पेश गर्न आह्वान गरेको छ । इँटा उद्योग सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष जीतेन्द्र खयमलीले उद्योगलाई वातावरणमैत्री बनाउनेबारे छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।
औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन ऐन २०५९ अनुसार इँटा उद्योग मानवबस्ती, विद्यालय र वन क्षेत्रभन्दा ५०० मिटर टाढा सञ्चालन गर्न पाइने प्रावधान छ । उद्योग मन्त्रालयको कार्य्विधि २०७२ अनुसार बस्तीबाट एक किलोमिटर टाढा उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । जिल्लाको पाँचखाल नगरपालिकामा सात, नमोबुद्धको भकुण्डेमा आठ, पनौतीको शङ्खुमा एक, बनेपामा एक, मण्डनदेउपुरमा दुई र धुलिखेलमा एउटा इँटा उद्योग रहेको छ ।
← वन जंगलको संरक्षण हुनुपर्छ ः मन्त्री नेपाल
असल अभिभावकलाई सम्मान →
(Kiran has been to radio since5years . He has the experiences of working in the radio stations of kavrepalanchowk , sindhupalchowk and among other districts ! Recently he is working at Radio Roshi of kavrepalanchowk asanews chief . He is interested in literature and journalism . We can listen his presentation on radio news, recorded programme and live programme as well. He can be found on social media such as facebook, twitter and instagram . )
April 2, 2019 RoshiKhabar 0
November 1, 2018 RoshiKhabar 0
रोशि गाँउपालिकामा प्राथमिक उपचार सम्बन्धि तालिम सम्पन्न, प्राथमिक उपचार गर्नेमा स्थानियहरु एकजुट
On -Air :: Now
Sudip on शिक्षकको भेला सम्पन्न
Copyright © 2019 Radio Roshi. All rights reserved.